မျက်ကွင်းညို တတ် သူ များ အတွက် ဆေးနည်းကောင်း – Zartiman
မျက်ကွင်းညို တတ် သူ များ အတွက် ဆေးနည်းကောင်း
ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ကောင်းတာမို့ မျက်ကွင်းမညိုခြင်ရင် အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ အသီးအနှံများများစားပေးပါ။ ရေများများ သောက်ပါ။အပြင်ထွက်ရင် နေကာမျက်မှန်တပ်ပါ။မျက်ကွင်းညိုခြင်းသက်သာချင်ရင်တော့ရေခဲကပ်ပေးပါ။ ( အဝတ်သန့်လေးထဲ ရေခဲ ထည့်ပြီး မျက်လုံးအောက်ကို ကပ်ပေးပါ)ခေါင်းအုံး အနည်းငယ်မြှင့် အုံးပါ။သခွားသီးကို ပါးပါးလှီးပြီး မျက်လုံးတစ်ဝိုက် ၁၅မိနစ်ခန့်နေစဉ် ကပ်ပေးပါ။သုံးပြီးသား ရေနွေးအိတ် Tea Bag နဲ့ နေ့စဉ် ၁၅မိနစ်ခန့်ကပ်ပေးပါ။ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားတဲ့ ဇွန်းနဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝှိက်ကပ် ပြီး ခဏတာသက်သာအောင်လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ မျက်ကွင်းညိုခြင်း သက် သာနိုင်ပါတယ်။
ဆေးနဲ့ကုသချင်တယ်ဆိုရင်တော့Chemical Peeling( ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ အရေပြား သန့်စင်ပေးခြင်း) လေဆာနဲ့ မျက်ကွင်း ညိုသက်သာ အောင်ကုသခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးကတော့ဖြူပါရဲ့။ မျက်ကွင်းလေးတွေပဲညိုနေတယ် ဆိုတာ ဘာတွေ ကြောင့်များဖြစ်နိုင် ပါလဲ ဆိုတာ ဒေါက်တာဇီဝကနဲ့အတူအဖြေရှာစို့လား?၁) အသက်အရွယ်အရ မျက်ကွင်းညိုတာလား?အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မျက်လုံး အောက်က အရေပြားတင်းရင်း မှု၊ အဆီဓာတ်မရှိတော့ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သွေးကြောလေးတွေပေါ်လာပြီး မျက်ကွင်းညိုလာတတ် ပါတယ် ။၂) အိပ်ရေးမဝလို့ မျက်ကွင်းညိုတာလား?ပုံမှန် အိပ် ချိန်လောက်မအိပ်ရဘဲ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ မျက်ကွင်းညိုလာတတ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးမဝတဲ့အခါ မျက်လုံးအောက်မှာ ဖောင်းလာပြီး မျက် လုံးအစ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။၃) ဖုန်း ၊ တီဗီအကြည့်များလို့ မျက် ကွင်းညိုတာလား?အလင်းရောင်စူးတဲ့ တီဗီ၊ ဖုန်းတို့ ကြည့်တာများလာရင် မျက်လုံးနားက သွေးကြော တွေ ဖောင်းတာ ရောင်ရမ်းတာဖြစ် စေလို့ မျက်ကွင်းညိုတတ်ပါတယ်။၄) ရေဓာတ်ခမ်းခြေက်လို့ မျက်ကွင်းညိုတာလား? ရေလုံလောက်စွာ မသောက်တာဟာလည်း မျက် ကွင်းညိုခြင်းအကြောင်းရင်း တစ်ခုပါပဲ။ တစ်နေ့ကို ရေ တလီတာ အနည်းဆုံးသောက်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။၅) နေရောင်ထိတွေ့မှုများလို့ မျက်ကွင်းညိုတာလား?
နေရောင် ထိတွေ့တဲ့အခါ မျက်နှာ အပါအဝင် ပါးလွှာတဲ့ မျက်လုံးတစ်ဝှိက်အရေပြားလေးတွေက နေလောင်ပြီး Melanin ဆိုတဲ့ အမဲရောင် ခြယ်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့အခါ မျက်ကွင်းညို လာပါတယ်။၆) မျိုးရိုးလိုက်လို့မျက်ကွင်းညိုတာလား?မိသားစု မျိုးရိုးအရ မျက်ကွင်းညိုမယ်ဆိုရင် မိမိမှာလည်း မျက်ကွင်းညိုနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် ညိုညိုမျက်ကွင်းညိုခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ရှည်လက်ရှည် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေ နဲ့ စနစ်တကျလျော့ ပါးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။
Crd , မယ်တင်( ဆေး ၁)
ကာကှယျခွငျးက ကုသခွငျးထကျကောငျးတာမို့ မကျြကှငျးမညိုခွငျရငျ အိပျရေးဝဝအိပျပါ။ အသီးအနှံမြားမြားစားပေးပါ။ ရမြေားမြား သောကျပါ။အပွငျထှကျရငျ နကောမကျြမှနျတပျပါ။မကျြကှငျးညိုခွငျးသကျသာခငျြရငျတော့ရခေဲကပျပေးပါ။ ( အဝတျသနျ့လေးထဲ ရခေဲ ထညျ့ပွီး မကျြလုံးအောကျကို ကပျပေးပါ)ခေါငျးအုံး အနညျးငယျမွှငျ့ အုံးပါ။သခှားသီးကို ပါးပါးလှီးပွီး မကျြလုံးတဈဝိုကျ ၁၅မိနဈခနျ့နစေဉျ ကပျပေးပါ။သုံးပွီးသား ရနှေေးအိတျ Tea Bag နဲ့ နစေ့ဉျ ၁၅မိနဈခနျ့ကပျပေးပါ။ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားတဲ့ ဇှနျးနဲ့ မကျြလုံးတဈဝှိကျကပျ ပွီး ခဏတာသကျသာအောငျလုပျမယျ ဆိုရငျတော့ မကျြကှငျးညိုခွငျး သကျ သာနိုငျပါတယျ။
ဆေးနဲ့ကုသခငျြတယျဆိုရငျတော့Chemical Peeling( ဓာတုပစ်စညျးနဲ့ အရပွေား သနျ့စငျပေးခွငျး) လဆောနဲ့ မကျြကှငျး ညိုသကျသာ အောငျကုသခွငျးလုပျနိုငျပါတယျ။မကျြနှာတဈခုလုံးကတော့ဖွူပါရဲ့။ မကျြကှငျးလေးတှပေဲညိုနတေယျ ဆိုတာ ဘာတှေ ကွောငျ့မြားဖွဈနိုငျ ပါလဲ ဆိုတာ ဒေါကျတာဇီဝကနဲ့အတူအဖွရှောစို့လား?၁) အသကျအရှယျအရ မကျြကှငျးညိုတာလား?အသကျကွီးလာတဲ့အခါ မကျြလုံး အောကျက အရပွေားတငျးရငျး မှု၊ အဆီဓာတျမရှိတော့ ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သှေးကွောလေးတှပေျေါလာပွီး မကျြကှငျးညိုလာတတျ ပါတယျ ။၂) အိပျရေးမဝလို့ မကျြကှငျးညိုတာလား?ပုံမှနျ အိပျ ခြိနျလောကျမအိပျရဘဲ အိပျရေးပကျြတဲ့အခါ မကျြကှငျးညိုလာတတျပါတယျ။
အိပျရေးမဝတဲ့အခါ မကျြလုံးအောကျမှာ ဖောငျးလာပွီး မကျြ လုံးအဈတာမြိုးတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။၃) ဖုနျး ၊ တီဗီအကွညျ့မြားလို့ မကျြ ကှငျးညိုတာလား?အလငျးရောငျစူးတဲ့ တီဗီ၊ ဖုနျးတို့ ကွညျ့တာမြားလာရငျ မကျြလုံးနားက သှေးကွော တှေ ဖောငျးတာ ရောငျရမျးတာဖွဈ စလေို့ မကျြကှငျးညိုတတျပါတယျ။၄) ရဓောတျခမျးခွကျေလို့ မကျြကှငျးညိုတာလား? ရလေုံလောကျစှာ မသောကျတာဟာလညျး မကျြ ကှငျးညိုခွငျးအကွောငျးရငျး တဈခုပါပဲ။ တဈနကေို့ ရေ တလီတာ အနညျးဆုံးသောကျဖို့မမကွေ့ပါနဲ့နျော။၅) နရေောငျထိတှမှေု့မြားလို့ မကျြကှငျးညိုတာလား?
နရေောငျ ထိတှတေဲ့အခါ မကျြနှာ အပါအဝငျ ပါးလှာတဲ့ မကျြလုံးတဈဝှိကျအရပွေားလေးတှကေ နလေောငျပွီး Melanin ဆိုတဲ့ အမဲရောငျ ခွယျပစ်စညျးထုတျတဲ့အခါ မကျြကှငျးညို လာပါတယျ။၆) မြိုးရိုးလိုကျလို့မကျြကှငျးညိုတာလား?မိသားစု မြိုးရိုးအရ မကျြကှငျးညိုမယျဆိုရငျ မိမိမှာလညျး မကျြကှငျးညိုနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုကွောငျ့ ညိုညိုမကျြကှငျးညိုခဲ့မယျဆိုရငျစိတျရှညျလကျရှညျ သဘာဝနညျးလမျးလေးတှေ နဲ့ စနဈတကလြော့ ပါးအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။
Crd , မယျတငျ( ဆေး ၁)
ဆီးအောင့်တယ်ကျင်တယ် ဆိုလျှင် ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပြုလုပ်ပေးပါ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်